Abọchị! | Martech Zone
Tuesday, February 13, 2007 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Ka m na-apụ n'ụgbọala m n'ụtụtụ a, enwere m oke ikuku oke mmiri. Chegodi mmiri ozuzo, dị nnọọ oyi. Aghaghị m ịgbaji mkpokoro ice na ụgbọ ala m (Ford 500) wee kpochapụ ihe dị ka sentimita 10 nke snow dara n'abalị ụnyaahụ. Kidsmụaka nọ n'ụlọ - akagbu ụlọ akwụkwọ. Emere m ka ọ rụọ ọrụ n'enweghị ọtụtụ nsogbu (ekele maka ịdị mma maka AWD).
I hiked the 4 blocks na-arụ ọrụ site na snow ma mara mma nke ukwuu ike gwụrụ (ee, M maara… ida ibu!). Na-arụ ọrụ, a mara mma ndokwa nke bagels na mkpụrụ osisi na-echere ndị nwere obi ike ole na ole mere ya. Na a ala na 30+ ndị ọzọ, Echere m na m bụ otu n'ime 6 na mere ya ka ọfịs. M na-ebi South nke Indianapolis na Northside n'ezie kụrụ ihe ọjọọ! Na n'abalị a, e nwere ihe a:
Si na Na-achọ TV:
Indianapolis bụ obodo mara mma mgbe snow na-ada. Ihe owuwu na ihe ncheta na-adi egwu na snow na-arapara na ha. Ọ bụrụ na m gaara ejiri igwefoto na-agagharị na today mana enwere ọrụ ịme.
Ọrụ bụ ezigbo ihe ịma aka. Anọ m ụbọchị na ozi ozugbo na ekwentị. Anyị enwetala ndị otu ọkachamara ọkachamara na-amalite ịmalite ike na nnukwu ntọhapụ maka mbido afọ na-abịa. Enweghị ndị ọzọ ibiaghachi echiche na nkọwa si n'ezie mere ka o sie ike na-arụpụta, otú ahụ ka m lie onwe m na akwụkwọ na mere ụfọdụ prototyping.
Ridegbọ njem ahụ dị jụụ. Site n'okporo ámá na-enweghị ihe ọ bụla, ekpebiri m ịkpọrọ nwa m nwoke, Bill, iji nweta ahụmịhe ịkwọ ụgbọala na snow. Anyị hụrụ a nnukwu efu ọtụtụ na ihe karịrị otu ụkwụ nke snow na m mere ya ụfọdụ donuts, ọnwụ nke akara omume, eji na ngwa ngwa braking… ọ mara mma tụrụ otú ụgbọ ala edozi ya (dị ka m)… antilock brek, traction njikwa, na ịkwọ ụgbọ ala niile na-enye ọtụtụ njikwa. Ọ dị ịtụnanya. Ọ na-eme ihe dị ka nkeji 30 wee pụọ naanị ma ọ bụrụ na mmadụ akpọọ ndị uwe ojii wee chee na anyị na-agagharị.
Anyị kwụsịrị maka nri abalị ngwa ngwa wee bata n'ụlọ ma malite igwu ụfọdụ PHP na API nke Technorati. Offọdụ n'ime koodu nlele ahụ emetụbeghị ọtụtụ afọ na saịtị ha (ndumodu, ihe ngosi). Site na njikwa PHP5 nke XML pụta ụwa, enwere m olileanya na mmadụ ga-emelite n'oge na-adịghị anya. Edere m ụfọdụ koodu mana enweghị m ike ịnweta azịza ziri ezi site na PHP… yabụ ugbu a enwere m nkụda mmụọ wee kpọọ ya otu abalị. Ekwetaghị m na ọ bụ API ha… M nwere ike bepụ ma mado arịrịọ m na ihe nchọgharị ahụ na enweghị nsogbu.
My olileanya bụ na-ewu a mara mma wijetị na-enye a profaịlụ nke a blog ranking ogo, ọhụrụ posts, mkpado ígwé ojii, wdg. Aga m aga ebe ahụ, mana m na-akpọ ya otu abalị. Ndo nke a abụghị post na-enye aka! Aga m alaghachi na egwu n'oge na-adịghị anya!
Aga m ehi ụra maka ibugo onu ugwu echi!
Gịnị kpatara m ga-eji ede blọgụ?
Ndi dmoz anwụọla?
Feb 14, 2007 n’elekere 4:39 nke abali
Anọ m na-achọ ụfọdụ ozi gbasara trackbacks (nke ahụ bụ otu m si chọta saịtị gị) mana enweghị m ike ịtụli, gịnị ka m na-ahụ ebe a na ihe ngosi! Arụrụ m ọrụ n’ebe na-adịghị anya na Richmond, yabụ snow nile a dị m n’anya! Chaị! 🙂
Feb 14, 2007 n’elekere 8:17 nke abali
Youchọtara ihe ịchọrọ na Trackbacks Maciek? Emere m post Ebe a.
Daalụ maka ịga! Anyị nwere oke ifufe 'na-afụ' snow taa mana ọ kwesịrị ikpochapụ n'ehihie a.
Feb 14, 2007 n’elekere 11:05 nke abali
Huh, ee achọpụtara m ihe m na - achọ - ekele. Nwere ike ịgwa m ihe kpatara WP ji ka Serendipity mma? Amalitere m weblog m kama iji sọftụwia Serendipity - ị maara ya?
[Esi m Poland, bi na Germany ugbu a - maka m ebili mmiri ndị ahụ abụghị ihe ọ bụla - ma na mpaghara Gị ọ dị obere - nwee obi ụtọ !!!]
Feb 14, 2007 n’elekere 11:36 nke abali
Amaghi nke oma Serendipity, Achọghị m ime ka ị ghara itinye ya n'ọrụ. Abụ m onye na-akwado WordPress n'ihi ike iji hazie ya na ọnụọgụ weebụ ọ nwere. Echere m na atụmatụ nke ngwanrọ ịde blọgụ na-aghọwanye ọkọlọtọ (pings, trackbacks, ịza ajụjụ, blogrolls, wdg), yabụ ọ bụrụ na ọ masịrị gị - gaa maka ya!
Otu isiokwu m gụrụ nwere Serendipity na nkwanye ugwu dị elu yana atụmatụ ahụ dabara adaba na WordPress, yabụ ejighị m n'aka na otu dị mma karịa nke ọzọ.